Qoyska Askari Ku Jira Gacanta Al-Shabaab Oo Codsaday In La Sii Daayo Wiilkooda | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Qoyska Askari Ku Jira Gacanta Al-Shabaab Oo Codsaday In La Sii Daayo Wiilkooda
September 30, 2016 - Written by Mustafe Faro
Nairobi:(Hubaal)-Qoyska askari u dhashay dalka Kenya ooku jira gacanta ururka Alshabaab oo ay dhowaana soo bandhigtay ururka Alshabaab ayaa codsaday in la sii daayo wiilkooda. Hooyada askarigan Christine Nzilani Kiiyo oo aqoonsatay sawirka wiilkeeda Leonard Maingi ayaa ooyin la dhacday waxana hadalladeedii kamid ahaa, “Waxaan ka codsanayaa dowlada inay sameyso wax walba oo ay ku badbaadin karto wiilkeyga,sidoo kale waxaan ka codsanayaa dadka haysta in ay sii daayaan,”ayay tidhi Mrs Kiiyo.
Wareysi ay weriyaal kula yeesheen tuulada Vengea ee deegaanka Makueni ayay hooyadan sheegtay in habeen iyo maalin ay ugu duceyso wiilkeeda inuu soo badbaadiyo.
Haweeneydan ayaa sheegtay inay ugu wardambeysay wiilkeeda January 1, 2016. Hase yeeshee waxaa hadda la ogaaday in wiilkeeda uu ka mid ahaa askartii lagu qabsaday xero ay ciidamada Kenya ee AMISOM ka tirsan ku lahaayeen deegaanka Ceel Cadde horaantii sanadkan.
Muuqaalka ay soo bandhigeen Alshabaab ayaa waxaa ay cadeyn u noqotay in hooyadan wiilkeeda ay qabsadeen Alshabaab markii ay weerareen saldhiga Ceel Cadde halkaa oo la sheegay in askar ka badan boqol kana mid ahaa ciidamada Kenya lagu diley.
Mr Maingi oo ahaa askari dhinaca caafimaadka u qaabilsanaa ciidamada Kenya ayaa muuqaal ay soo bandhigeen Alshabaab waxa uu ka codsaday Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta in wadahadal uu la galo Alshabaab si isaga iyo askarta kale ee la xidhan loo sii daayo.
Xaaska askarigan Eunice Maingi iyo saddex wiil oo uu dhalay ayaa raadinayay halka uu ku dambeeyay kadib markii laga waayay meydadka la geeyay dalka Kenya. Xaaska askarigan ayaa sheegtay in ugu war dambeysay January 12 oo ahayd saddex maalmood kahor ayuu taleefan kula soo xidhiidhay isagoo jooga Ceel Cadde.